टर्की पालन ब्यवसायले मिनाको जीवनमा ल्याएको खुसी ! – Social Touch Khabar
टर्की पालन ब्यवसायले मिनाको जीवनमा ल्याएको खुसी !
नेपालगञ्ज (बाँके) । पछिल्लोसमय टर्कीको ब्यवसाय निकै राम्रो मानिएको छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि टर्कीको मासु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिएको छ । थोरै लगानीमा पनि राम्रो मुनाफा हुने भएपछि यो ब्यवसायप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको हो । र यसको बजार माग पनि उत्तिकै चुलिँदो छ । ब्यवसायको राम्रो सम्भावना देखेपछि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर– ४ स्थित बैजनाथ पोल्ट्री फार्म सञ्चालन गरेर मिना पुनले राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन् । मिना पुन टर्कीसँगै दिनरात रमाउँछिन् । उनी टर्की पालन ब्यवसायमा लागेको २ बर्ष भयो । यो छोटो समयमा नै उनी यो ब्यवसायबाट सफल बनिन् । मिनाले अहिले सबै खर्च कटाएर ७५ हजार रुपैयाँ मासिक आम्दानी गर्दै आइरहेकी छिन् ।
किन मिनाको रोजाईमा टर्की ?
मिना पुनले यति छिट्टै सफलता पाउँछु भनेर सायदै सोचेकी थिइन् । अहिले उनीसँग साढे ४ लाख रुपैयाँबराबरको टर्की र कुखुरा छन् । बरोजगारको अवस्थामा रहँदा के गरौँ र कसो गरौँ भएकी मिनालाई सामाजिक सञ्जाल बरदान सावित भयो । यूट्युब चहार्दै जाँदा टर्की पालन गरेर सफल बनेका ब्यक्तिको प्रोफाइल रिपोर्ट हेरेपछि उनले टर्की पाल्न सुरु गरिन् । ब्यवसाय सुरु गरेपछि मिनालाई विहान उठेदेखि बेलुकासम्म दिन बितेको थाहाँ नै हुँदैन् । बिहान टर्कीलाई दानापानी हाल्ने, खुल्ला ठाउँमा छोड्ने गर्छिन । ब्यवसायबाट राम्रो आम्दानी भएपछि ५ हजार टर्की पाल्ने मिनाले सपना बुनेकी छिन् ।
उनले टर्कीसँगै कडकनाथ कुखुरा पनि पालेकी छिन् । कडकनाथ कुखुरी र कुखुराको मूल्य बोइलरको तुलनामा दुई गुणा बढी हुन्छ । कडकनाथ भारतमा पाइने एक मात्र कालो मासु भएको कुखुरा हो । अनुसन्धानअनुसार, यो मासुमा सेतो कुखुराको तुलनामा कम कोलेस्ट्रोलको मात्रा रहेको छ । यसमा अमीनो एसिड कम हुन्छ । भारतका विभिन्न भागमा यो कुखुरा पाइन्छ । केही जरूरी कुरामा ध्यान दिँदा यसलाई नेपालमा पनि पाल्न सकिन्छ । यो कुखुराको मासु र अण्डा महङ्गो मूल्यमा बिक्छ । दक्षिण एसिया गरीबमुखी पशुपालन नीति कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको एक अध्ययनअनुसार ६ महिनाको देशी कुखुरा ८० देखि ९० भारतीय रुपैयाँमा बिक्छ । कडकनाथ कुखुराको मूल्य भने भारु सयदेखि १५० पर्छ । अहिले मिना यो ब्यबसायबाट सन्तुष्ट छिन् । टर्कीको मासु ५ महिनादेखि खान तयार हुन्छ । मासु प्रतिकिलो ९ सय रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको मिनाले बताइन् । उनको घर नजिकैको बजार कोहलपुर र छिमेकी जिल्लामा मात्र होइन्, टर्कीको मासु जुम्लासम्म पुग्ने गरेको मिनाको भनाई छ ।
टर्कीसँगै बट्टाइ पालन
मिना पुनले बट्टाइ पनि पालेकी छिन् । आजभोलि यसको अण्डा र मासुको ब्यापार पनि बढिरहेको छ । सानो ठाउँमा पनि धेरै बट्टाइ पाल्न सकिन्छ । यसको अण्डा कुखुराको अण्डाभन्दा सस्तो र बढी लाभदायी हुन्छ । यसबाट पनि मिनाले राम्रै आम्दानी गर्दै आइरहेकी छिन् । गरे के हुँदैन् र ? भन्ने उदाहरण बनेकी छिन्– मिना पुन । यो ब्यवसायमा लागेपछि मिनाले आम्दानी मात्र होइन्, नाम पनि कमाएकी छिन् । अहिले मिना सफल कृषककारूपमा त्यस वरपर दरिएकी छिन् । दिनहुँ केही मानिसहरू उनको फार्म अबलोकन गर्न आउँछन । यो खुसी मिनाको परिश्रमको परिणाम हो ।
टर्की पालन गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ?
बिगत केही बर्षदेखि टर्की पालन ब्यवसाय ग्रामिण कुुखुराजस्तै राम्रो फस्टाएको छ । यो कुखुराजस्तै भएको हुनाले किसानको आकर्षण पनि बढेको हो । हामीले कुखुरासँगै टर्कीलाई पनि पाल्न सक्छौँ भने अलग गरेर पनि पाल्न सक्छौँ । उत्पादन पनि छिटो हुने र यसको तौल पनि बढि नै हुन्छ । डेढ दुई किलो हुन्छ । पूर्णरुपले एक बर्ष पाल्यो भने मासुको लागि पनि राम्रो हुन्छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका पशु सेवा शाखाका अधिकृत खड्कबहादुर सिंहकाअनुसार यो ब्यवसाय गर्दा टर्कीमा निमोनिया टाइपको रोग लाग्छ, अनुहारको चुचोमा विशेष गरी यो घाँटीभन्दा माथि विविरा आउने रोग लाग्छ । चिसोको मौसममा टर्कीका बच्चाहरुलाई धेरै रोग लाग्छ । यस्ता रोगबाट बच्नको लागि खोरको र तारबारको राम्रो ब्यवस्था तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने पशु सेवा शाखाका शाखा अधिकृत सिंहले बताए । टर्की पालन गर्न अग्लो हावा पास हुने खालको घर चाहिन्छ । टर्कीलाई खेल्नलाई बातावरण खुल्ला हुनुपर्छ । टर्कीले दुबो र घाँसहरु मन पराउँछ ।
के छ त मिनाको अबको सोच ?
यो सफलतापछि मिनाले कृषि पर्यटनलाई पनि अगाडि बढाउने सोच बनाएकी छिन् । आफुले उत्पादन गरेको टर्की, बट्टाइ, कडकनाथ कुखुरा र माछाको खपत गर्न सजिलो पनि हुने र ब्यवसायप्रतिको लक्ष्य पुरा गर्न मिनाले होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउँदै छिन् । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । अबको केही समयपछि मिनाले बनाएको कृषि पर्यटनको योजनाले मूर्तरूप लिने छ ।
सबैले जान्नुपर्ने कुरा के त ?
हामीले कुनैपनि ब्यबसाय गर्दा ठूलाठूला लगानीको सोच राख्छौ । मिनाको पहिचान अहिले देशभरि छ । टर्की पालनबाट पनि जिवन सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी मिना पुन अझै यो ब्यवसायलाई ब्यबस्थित बनाउने सोचमा छिन् । यो कर्मले मिना आर्थिकरूपमा सक्षम मात्र बनेकी छैनन्, उत्पादनमा पनि सहयोग पुगेको छ । यस्ता किसानहरूको प्रयासले नेपालमै उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्छ । अनि परनिर्भरता कम हँ्दै जान्छ । त्यसपछि मात्र आर्थिक सम्बृद्धि सम्भव छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा मिना पुनले सुरु गरेको यो ब्यवसाय तपाइ हामी सबैले गर्न सक्छौँ । तर, किसानले कुनैपनि ब्यवसाय गर्दा कृषि विज्ञको सल्लाह र सुझाब लिन आवश्यक हुन्छ । अनि मात्र लगानी तथा बजारीकरणबारे जानकारी लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सफलता हात पर्छ ।
एक हजारबाट शुरु गरेको कृषिले बनायो करोडपति !
भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिक कृपाश्वर घलेको फस्टाउँदो ड्रागन खेती